Amashiya ampunga - Ngingawafihla kanjani | Bezzia
Izinyathelo zokufihla izinwele ezimpunga emashiya
Ingabe ufuna ukufihla izinwele ezimpunga kumashiya akho? Bese kuba nochungechunge lwamaqhinga okufanele uwasebenzise. Kuvamile ukuthi ngolunye usuku, lapho sidiliza le ndawo, sibone indlela ezinye izinwele ezimhlophe ezithathe ngayo. Isikhathi sokwenza okuthile ukuze wenze ibunzi lonke libukeke ngombala owodwa ofanayo.
Kungani nginezinwele ezimpunga emashiyeni ami? Ngenxa yokulahleka okuqhubekayo kwe-melanin, siqala ukubona izinwele ezimhlophe. Kodwa hhayi emashiya kuphela kodwa nezinwele ngokuqinisekile zizoba nazo. Akufanele ukhathazeke ngoba kukhona njalo uchungechunge lwezinyathelo namathiphu ongawasebenzisa ngokushesha ngangokunokwenzeka. Zitholele konke esikulethayo!
1 Fihla amashiya ampunga ngezimonyo
3 Amakhambi asekhaya amashiya ampunga
Fihla amashiya ampunga ngezimonyo
Njengoba wazi, izimonyo zingolunye losizo olukhulu esingaba nalo. Ngoba uma imayelana nokuzenzisa, izofeza umsebenzi wayo. Yebo kufanele sihlale sikhetha imikhiqizo engcono kakhulu, kanye nethize. Kulokhu ungathola ipensela yeshiya noma, nge-makeup futhi ehloselwe amashiya. Uma uneziphequluli ezikhanyayo, ngakho-ke kungcono ukhethe ipensela noma umbala okhanyayo kancane kunomthunzi weziphequluli zakho..
Ngesikhathi uma unezinwele ezimnyama kakhulu bese uya umthunzi noma ezimbili ezimnyama nakakhulu. Uma usuyikhethile, kufanele uhlanganise kahle amashiya ukuze umbala uhlakazeke ngokulinganayo. Uzodweba imigqa yamashiya akho bese uwagcwalisa ngokucophelela. Okokugcina ungazisiza ngebhulashi. Lokhu kufanele kube kuhle kakhulu, ukuze kube nokunemba okwengeziwe. Ungenza okufanayo nangepensela bese ugcoba kancane ngebhulashi. Umbono wukuthi indawo imbozwe kodwa ngalokho kuqedwa kwemvelo.
Njengoba sinodayi ukuze sikwazi ukuveza imibala eyahlukene ezinweleni zethu, endabeni yamashiya akhona aqondile. Ngale ndlela ungakwazi ukufihla izinwele ezimhlophe ngokuphazima kweso. Yebo kunjalo, ungadayi amashiya ngodayi wezinwele, ngoba ungase ube nokucasuka endaweni. Ngakho-ke, kufanele uthenge udayi othile futhi ulandele imiyalelo yawo. Lezi zivame ukuzisebenzisa zibheke ekukhuleni kwezinwele, kodwa zibheke kolunye uhlangothi. Ngale ndlela siqinisekisa ukuthi konke kuhlanganiswe kahle. Sizolinda ngaphansi kwemizuzu eyi-10 futhi yikho nje. Kunezindlu eziningana ezinama-ebrow tints futhi ezinye zazo sezivele zinemikhiqizo eqondile ngendlela yamapensela ukwenza inqubo ibe lula.
Amakhambi asekhaya amashiya ampunga
Ngakolunye uhlangothi ungenza i-chamomile njengenjwayelo. Uma sekubanda, kuzomele uhlanganise izipuni ezine zawo ne ingcosana ye-turmeric (okuncane okungaphansi kwengxenye yesipuni). Manje, sizoxuba kahle futhi izobe isilungele ukusetshenziswa. Yiqiniso, kungcono ukukwenza ngebhulashi. Ushiya kuphela imizuzu emi-5 bese ugeza ngamanzi.
Faka futhi okunye ukumnika itiye elimnyama Iyasebenza. Ngoba lena inezingulube ezizofihla izinwele ezimpunga. Kodwa kuyiqiniso ukuthi kungokwesikhashana.
ikhofi kanye ne-cocoa kungenye yezithako ezinhle esizixubayo ezinganikeza amashiya ethu lowo mbala omnyama, ukuvalelisa izinwele ezimhlophe. Kufanele kube ikhofi elimnyama ne-cocoa powder nakho konke okuxutshwe kahle. Uma ingxube iphuma amanzi kakhulu, khona-ke ungakwazi ukwengeza uju oluncane. Ngayo uzobona ukuthi inamathela kanjani kangcono kakhulu esikhumbeni sakho.
Njengoba wazi, wonke lawa maqhinga azonikeza umbala ezinweleni, kodwa ngokunengqondo ngeke ahlale. Kungashiwo nje ukuthi bayobe bephelele ukuze baphume enkingeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Izinyathelo zokufihla izinwele ezimpunga emashiya
Kungani bethi amakati anezimpilo eziyisi-7?
I-imeyili Marketing, ithuluzi elibalulekile lebhizinisi lakho